Kwa atọ German weere cryptocurrencies dị ka onye na ego - Blockchain News
Kwa atọ German weere cryptocurrencies dị ka onye na ego
Ọ bụ ezie na Bitcoin, Ethereum na Co. na-kụrụ ike site price ọwọrọde na nso nso, ha na-ewu ewu mere obere imerụ ha. A ngụkọta nke 29 percent nke German ụmụ amaala ahụ digital ego dị ka ihe na-akpali ego. The nnọchiteanya nnyocha e mere na onodu nke Postbank Digital Study 2018 weere ọnọdụ n'etiti ọgwụgwụ nke February na ọgwụgwụ nke March, ie ozugbo mgbe ụfọdụ nnọọ nkọ price dara ke dijitalụ ego. Ọ kachasị, nnwere onwe nke usoro iwu ego na usoro na atụmanya nke elu-alaghachi-akpa a oké mmasị na Germany. The mmasị nke ndị na-eto na digitally affine Germany na-karịsịa akpọ. Na afọ otu n'etiti 18 na 34, fọrọ nke nta otu abụọ (46 percent) na-nwere mmasi cryptocurrencies dị ka onye na ego – n'agbanyeghị na-abụkarị akụkọ.
Media ọnụnọ enwekwu mmasị na Bitcoin na Co
Afọ gara aga, cryptocurrency udu wụpụ otu ndekọ elu ọzọ, ma ebe ọ bụ na ọgwụgwụ nke 2017, price nke Bitcoin, ndị kasị n'ọtụtụ ebe na cryptocurrency, adawo karịa 65 percent. The media kọrọ ọtụtụ na price fluctuations na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-anọchite anya na-ekwu okwu na ịdọ aka ná ntị; dị ka Deutsche Bundesbank ma ọ bụ ndị German Financial nlekọta Authority Bafin. Na olu nke ndị ọkachamara, onye buru amụma a mgbanwe ke ego azụmahịa site cryptocurrencies, ghọkwara ihe were dị jụụ.
“Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na Germany ka bụ ndị nwere mmasị na-cryptocurrencies dị ka a ego ego n'agbanyeghị elu weere na doro anya ihe ize ndụ,” kwuru Dr. Thomas ụkọ, Postbank Chief Digital Officer. “E nwere N'ezie a ezigbo ihe ize ndụ na ndị mmadụ ga-atụfu ego nanị n'ihi na ha na-eso a mama.” Bitcoin bụ ndị mbụ cryptocurrency na 2009, na ugbu a na e nwere karịa 1,500. Decentralized data management na cryptographically nwetara ogbugba ndu ike digital azụmahịa ịkwụ ụgwọ na-enweghị isi ọchịchị dị otú ahụ dị ka mmiri.
Women na-mmasị site na usoro onwe, ikom site nloghachi ohere
Ọ bụ karịsịa nnwere onwe nke ike ego na sistemụ na-fascinates Germany banyere cryptocurrencies. Akụkụ a bụ budata ọzọ dị mkpa n'ihi na ndị inyom (60 percent) karịa maka ndị ikom (51 percent). Atụmanya nke e weere elu-alaghachi, n'akụkụ aka nke ọzọ, karịsịa wutere ikom (56 percent tụnyere 36 percent nke ndị inyom). N'ihi na ọ bụla nke atọ ofufe nke cryptocurrencies, anonymity dịkwa mkpa. N'adịghị ka, ọmụmaatụ, ụlọọrụ shares, onye ọṅụ abụghị nke mmasị. Na a na-ahụ ihe nketa nke cryptocurrencies dịghị akụ ọrụ ma ọ bụ ore nwere nghọta n'ime ebusa. N'ihi na ọ bụla ise nwere mmasị, e nwekwara nmekorita dị ka obi ụtọ na “gold digger mmetụta” nke etinye na a dịtụ ọhụrụ ụdị digital ego.
Mmasị na-eto eto karịsịa nnukwu
The nzọụkwụ ego e mere karịsịa site na-eto eto. Na isii percent, digital natives nwere okpukpu abụọ ọtụtụ cryptocurrencies dị ka nkezi ọnụ ọgụgụ ndị bi. Na ọzọ ọnwa iri na abua, ọzọ 14 percent nke 18- na 34 nọ n'agbata afọ ka chọrọ na-eto eto cryptocurrencies. Gafee niile afọ iche iche, nke a bụ naanị asatọ percent. “N'agbanyeghị niile mmasị, eto eto investors ekwesịghị ichefu nke na-enye site na ike na ichekwa ego na bank usoro. Onye ọ bụla nke na-ama na-eme ka onye na ego na ala dị ka onye na ego ga-bụghị itinye ego na cryptocurrencies n'ihi na elu ize ndụ ndị. N'ihi na nke a na ụdị ego bụ ukwuu ada, “na-aga n'ihu Thomas Mangel.
Ihe ọmụma banyere ohere na ihe ize ndụ na-eleghị anya nnọọ njikọ
The elu price fluctuations na cryptocurrencies nakwa dị ka atụmatụ site ụlọ akụ syndicates ma ọ bụ ọbụna mba ha guzosie ike cryptocurrencies emewo ka ebe nile media mkpuchi. The results nke ọmụmụ na-egosi na nke a media ọnụnọ-edu ndị na Germany ikwubi na ha bụ ndị maara na cryptocurrencies – n'ihi na ha ugbua na-agụ ma ọ bụ nụrụ nke ukwuu banyere ha. 20 percent nke Germany ichere onwe ha a mma ma ọ bụ nnọọ ezi ihe ọmụma nke cryptocurrencies. The digital natives eche ọbụna odi mfe n'ala: 29 percent nke 18- na 34 nọ n'agbata afọ-ewere onwe ha “kaadị connoisseurs”.
“N'ihi na media hypes, ọtụtụ ndị overestimate ha ihe ọmụma nke ohere na ihe ize ndụ nke cryptocurrencies dị ka onye na ego,” adọ aka ná ntị Thomas Mangel. Ọmụmaatụ, ọtụtụ ndị ga-amaghị na uru site cryptocurrencies mkpa ka a n'ụzọ zuru ezu ha ụtụ isi ma ọ bụrụ na ha na-agaghị na-ọ dịkarịa ala a afọ. Karịsịa ihe nile, ihe ize ndụ nke ngụkọta ọnwụ, nke adịghị adị n'ihi na ndị ọzọ investments n'ụdị a, bụ nyere ezu echiche. Onye ọ bụla ga-achọ itinye ego na cryptocurrencies, Otú ọ dị, na-gwara ịhọrọ naanị a nchikota na ha nwere ike ime na-enweghị.
Background ọmụma na Postbank Digital Study 2018 – The Digital German na Money
Na oge site na February ka March nke afọ a, 3,100 Germany a gbara ajụjụ ọnụ maka Postbank Digital Study 2018 – The Digital German na Money. Nke anọ oge na a n'usoro, Postbank si ọmụmụ enyocha nmepe na na-abụrụ na dị iche iche ebe nke German ndụ na mmekọrita digitization n'ozuzu na ego isiokwu akpan akpan. Iji-egosi a bi-nnọchiteanya Ọdịdị, na sample e dara nha ala (proportionalization), afọ na okike. The akwụkwọ faịlụ dabeere na Census 2011 nke Federal Statistical Office. The results na-mechie ka dum nọmba. Deviations na totals nwere ike kọwara Ịchịkọta iche.
An-akụzi akụkọ ...
Coinbase nwere ịzụlite ...
Kylie Terrezza kwuru:
June 19, 2018 na 5:09 PM
July 21, 2018 na 7:31 PM